I-PSG Football Diary- Izingane Zengane zezinkanyezi zamanje nezokuqala
Ikhaya Amathegi I-PSG Football Diary
Maka: I-PSG Football Diary
Siyakwamukela ku-PSG Football Diary ye-Childhood Stories Plus Untold Biography Imininingwane ye-PSG Football Stars yamanje neyedlule. Lapha, senze abafundi bakwazi ukuthola, ukufezwa kokubili kwamanje ne-Classic PSG Football Stars abaye badla umdlalo omuhle webhola.
Ngaphandle kokungabaza, i-PSG imenzele ibhola futhi abalandeli bayo baziqhenya. Abadlali bayo bamanje nabadala bayakufanelekela ukuba seBhola Diary yeFame.
I-LB iveza Indaba Egcwele Yomdlalo Webhola owaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso "uLuca". Indaba yethu yeLucas Digne Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso ...
vannyhenrico - February 20, 2019 0
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso esithi "Ukuhlambalaza". I-Thilo Kehrer Indaba Yobuntwana Kanye ne-Untold ...
vannyhenrico - February 17, 2019 0
I-LB inikeza iNdaba ephelele yoMphathi webhola owaziwa kakhulu ngegama lesidlaliso esithi "The Professor". I-Thomas Tuchel Ingane Yethu Yokubambisana plus ...
vannyhenrico - February 4, 2019 0
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngokuthi "uMarquinhos". Indaba yethu ye-Marquinhos Childhood kanye ne-Untold Biography Facts kuletha ...
vannyhenrico - January 31, 2019 0
I-LB inikeza iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa ngokuthi "Bernat". I-Juan Bernat Ingane Yethu Indaba ne-Untold Biography Facts ...
vannyhenrico - January 27, 2019 0
I-LB inikeza iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa ngokuthi "Meunier". I-Thomas Meunier Childhood Indaba yethu kanye ne-Untold Biography Facts ...
I-LB inikeza indaba ephelele ye-Football Genius eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "I-Bison". I-Serge Aurier Childhood Story yethu kanye ne-Untold Biography ...
vannyhenrico - July 23, 2018 0
I-LB inikeza iNdaba Egcwele Yebhola le-Football Genius eyaziwa kakhulu ngokuthi uKimpembe. Indaba yethu ye-Presnel Kimpembe Childhood kanye ne-Untold Biography Facts iletha ...
I-Adrien Rabiot Ingane Yabantwana Ingane Plus Untold Biography Facts
vannyhenrico - July 20, 2018 0
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele ye-Football Genius eyaziwa ngokuthi 'i-Adrien'. Indaba yethu ye-Adrien Rabiot Ingane kanye ne-Untold Biography Facts kuletha ...
Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Unai Emery Childhood Story Plus
vannyhenrico - July 16, 2018 0
I-LB inikeza iNdaba ephelele yoMphathi webhola owaziwa kakhulu ngegama lesiteketiso "Traffic Warden". Indaba yethu ye-Unai Emery Ingane ne-Untold Biography ...
123Ikhasinkomba 1 of 3